Shakhsiyaadka iyo Daryeel bixiyayaasha - Cuntooyinka Lugaha
Shakhsiyaadka iyo Daryeelayaasha
Waxa Cunto on Wheels bixisaa waa mid fudud, laakiin aad muhiim u ah: cunnooyinka si fiican loo soo koobay oo la geeyo gurigaaga oo ay la socdaan booqasho iskaa wax u qabso saaxiib. Markii aad Saxiix Cunnada Lugaha, waxaad kaheli doontaa cunnooyinka caafimaadka qaba ee aad rabto oo aad ugu baahan tahay gaarsiinta iyo xulashooyinka menu ee kuu oggolaanaya inaad si madax-bannaan ugu noolaato gurigaaga. Eeg a muunad menu, menu en espanol.
Saxeex si aad u hesho Cunno!
Su'aalaha la Weydiiyo ee Macaamiisha iyo Daryeelayaasha
Sideen isku diiwaan geliyaa cuntada?
Saxeexida cuntada waa fududahay! Isku qor internetka maanta ama naga soo wac (612) 623-3363 si aad u bilowdo adeegga gaarsiinta cuntada. Shaqaalaheena saaxiibtinimada leh ayaa ku farxi doona inay ku caawiyaan haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah.
Ayaa u qalma inuu helo Cunnooyinka Lugaha Lugta?
Haddii aad rabto sahlanaanta cunnooyinka caafimaadka leh iyo kuwa diyaarka u ah in la keeno gurigaaga, ama aanad awoodin inaad naftaada u diyaariso cunnooyin nafaqo leh, waxaad ka heli kartaa cunno ka socda Cuntada Taayirada! Cunnooyinka ayaa la heli karaa labadaba muddo-dheer iyo ku-meel-gaar ah haddii aad ka soo kabanayso qalliin ama jirro.
Waa maxay cuntooyinka sida? Ma arki karaa liiska cuntada?
Dhammaan cuntooyinka waxaa lagu diyaariyaa cusbo aan lahayn wax-ilaaliyeyaal waxaana lagu sameeyaa gudaha. Cunto kasta waxay ka kooban tahay qaybo caafimaad leh oo ay ku jiraan gelinta, khudradda, rootiga ama badarka, miro ama macmacaan iyo cabitaan. Waa kan a liiska tusaalaha, menú en español.
Waa imisa qiimaha cuntadu? Caawimaad ma la heli karaa?
Food on Wheels waxay ku siinaysaa qiimo aad u wanaagsan waxaad hesho - cunto cusub oo diyaarsan, diyaar u ah in la cuno oo si toos ah albaabkaaga laguugu keeno. Inta aanu ku waydiisanayno wax ku biirinta cuntadaada, qiimuhu wuxuu ku salaysan yahay baahida. Cuntooyinka waxaa laga yaabaa in loo oggolaado iyada oo qayb ka ah adeegyada guriga-iyo bulshada ku salaysan ee Minnesota barnaamijka dhaafitaanka Medicaid, iyo barnaamijyada kale ee kabidda ayaa sidoo kale kaa caawin kara daboolida kharashka adeegga bixinta cuntada. Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan doorashooyinka maalgelinta ee macaamiishaada, naga soo wac (612) 623-3363.
Cunnooyinka Wheels-ka ayaa si farxad leh u bixiya ikhtiyaarrada cuntada sokorta ku yar, ikhtiyaarrada soodhiyamka ku yar, iyo sidoo kale xulashooyinka khudradda. Si fudud u cadee baahiyahaaga cunto marka aad iska qor cuntada.
Maxay yihiin xulashooyinkaaga bixinta? Cunno miyaa lay siin karaa toddobaadle?
Marka lagu daro cunnada kulul ee caadiga ah la bixiyo Isniinta illaa Jimcaha inta u dhexeysa 11ka subaxnimo ilaa 1da duhurnimo, waxaan sidoo kale bixinnaa toddobaadle gaarsiin ah isla cuntooyin aad u wanaagsan oo dib loo cusbooneysiin karo markay kugu habboon tahay. Haddii aad jeclaan lahayd cunnooyinka dhammaadka usbuuca ama ciidaha, cunno dheeri ah ayaa la geyn karaa inta lagu jiro usbuuca. Eeg tusaalooyinka tusaalaha usbuuc walba gaarsiinta.
Cunnooyinka Kosher, Soomaali / Xalaal iyo xulashooyinka kale ee cuntooyinka gaarka ah ee xulashooyinka ah ayaa laga heli karaa meelo badan. Waad cayimi kartaa doorbidyada cuntada dhaqanka markii aad iska qor cuntooyinka khadka tooska ah ama markii aad naga soo wacdo 612-623-3363.
Kheyraad Dheeraad ah oo loogu talagalay Dadka Waaweyn
Kheyraad dheeraad ah oo ka caawiya waayeelka iyo dadka naafada ah inay si madax-bannaan ugu noolaadaan guriga.